पाकिस्तान विमान दुर्घटनामा नायिका र उनका श्रीमानको मृ’त्यु? यस्तो छ वास्तविकता – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > पाकिस्तान विमान दुर्घटनामा नायिका र उनका श्रीमानको मृ’त्यु? यस्तो छ वास्तविकता
admin May 23, 2020 Uncategorized	0
शुक्रबार दिउँसो पाकिस्तानको कराँचीमा एक यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त भयो । पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए)ले लाहोरबाट कराँचीका लागि उडान भरेको थियो जुन कराँचीको विमानस्थलमा अवतरण गर्नुअघि दुर्घटनाग्रस्त भयो ।
प्राप्त जानकारीका अनुसार विमानमा ९८ जना सवार थिए । विमान दुर्घटनापछि सोसल मिडियामा पाकिस्तानी नायिका आयजा खान र उनका श्रीमानको मृत्यु भएको खबर भाइरल हुन थाल्यो जसमा नायिका आयजाले रोष व्यक्त गरेकी छिन् ।
आयजा खान पाकिस्तानकी चर्चित नायिका हुन् र अहिलेसम्म उनले थुप्रै सुपरहिट टिभी सिरियलमा काम गरिसकेकी छिन् । ‘प्यार अफजल’, ‘मेरी जिन्दगी है तू’, ‘सारी भूल हमारी थी’, ‘थोडा सा हक और अधुरी औरत’ जस्ता थुप्रै टिभी सिरियलमार्फत् आयजाले चर्चा बटुलिसकेकी छिन् ।<
दुखद खबरः ट्रककाे ठक्करबाट एक युवतीकाे मृत्यु! RIP लेख्नुहाेस, हार्दिक श्रद्धाञ्जली!
विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवानालगायत विषय संशोधन गरेर जान सकिने: मन्त्री बाँस्कोटा